नायिका नीता ढुंगाना र हरिहरको चल्यो विवाह चर्चा, कहिले गर्दै छन् त? -
Homeसमाचारनायिका नीता ढुंगाना र हरिहरको चल्यो विवाह चर्चा, कहिले गर्दै छन् त?
March 1, 2021 admin समाचार 1192
अभिनेत्री नीता ढुंगाना र ज्योतिष अ’भिनेता हरिहर अधिकारीबीचको अफेयर अब कुनै अ’नुमानको विषय रहेन । नीता ढुंगानाले भ्यालेन्टाइनको दिन हरिहरलाई जन्मदिनको शुभ’कामना दिएपछि दुवैको अफेयरको ख’बरले औपचारिकता पाएको छ । किनकि हरिहरको जन्मदिन फा’गुनमा हैन चैतमा पर्छ । नीताले भ्यालेन्टाइनका दिन हरिहरलाई जन्मदिनको शुभकामना दि’एर हरिहर र आफ्नो प्रेम सकारेकी हुन् । नीताले भ्यालेन्टाइनको यो संके’तलाई दरिलो बनाएका छन् हरिहरले । यतिबेला नीता भो’जपुरी फिल्मको सुटिङको सिल’सिलामा आगरामा छिन् ।
‘माही’ नामको यो फिल्म’को सुटिङ आगरा वरप’रका लोकेसनमा भइरहेको छ । तर, फिल्ममा प्रेमी प्रेमिका एक अर्का’लाई भेट्न ‘आतुर भए झैं नीता र हरिहरलाई पनि एक डेढ महि’नाको समय काट्न यति कठिन भयो कि नीतालाई प’छ्याउँदै हरिहर यतिबेला भारत पुगेका छन् । यसको पनि पुष्टि नीता स्वयंले गरेकी छिन् ताजमहललाई पृष्ठ’भूमिमा राखेको खिचेको फोटो राखेर । फोटोमा उनले लेखेकी छिन्, ‘तिमी आयौ बहार आयो ।’
इकाग’जलाई प्राप्त सूचना अनुसार हरिहर य&तिबेला दिल्लीमा छन्, आगराबाट सालाखाला २ सय १२ कि’लोमिटर टाढा । रेलमा साढे तीन घन्टा । गाडीमा ५ घन्टा । हरिहरले त्यहाँ भेटिने नेपालीलाई आफू संस्कार टेलि’भिजनमा ज्योतिषीय कार्यक्रम चलाउने सिलसिलामा दिल्ली आएको बताउने गरेका छन् । तर, हरिहरले ल’गाएकै चश्मा लगाएर नीताले फोटो पोस्ट गरे_पछि हरिहर ज्योतिषको के कसो हो प्रेमको कार्यक्रम चैं पक्कै च’लाउन आएका हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यसमाथि नीताको ‘बहारवाला’ क्याप्सन ।
सूत्र भन्छ, नीता र हरिहर मायाको सिरियस मोडमा छन् र चाँडै विवाह गर्ने त’यारी गरिरहेका छन् । ‘वैशाखमा विवाह गर्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ । कति पक्का हो त्यो चैं थाहा छैन,’ स्रोतले इकाग’जसँग भन्यो । हरिहर र नीताको चिनजान पुरानो भए पनि गत सालको कात्तिकमा वीरगन्जमा भएको ‘स्व’र्णीम फिल्म महोत्सव’यता दुवैको मित्रता गाढा भएको थियो । यतिबेला हरिहर र नीताले सँगै नृत्य गर्नुका साथ अधि’कांश समय साथ बिताएका थिए । वीरगन्ज’बाट फर्कंदा पनि नीता हरिहरकै गाडीमा काठमाडौं फर्कि’एकी थिइन् । – इताजा खबरबाट
January 7, 2021 admin समाचार 2187
कागतीको रस नि’चोरपछि यसको बोक्रा हामी फ्याक्ने गर्दछौ । तर, कागतीको रस जतिकै बोक्रा पनि हाम्रो स्वास्थकालागि फाइदाजनक छ भन्दा पत्यार नलाग्ला । फिट र स्वास्थ रहन हामी कागतीको सेवन गर्दछौ । यसमा पाइने भि’टामिनले
December 13, 2020 admin समाचार 2847
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (161089)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (150506)